Oromiyaa – Rabira News
May 7, 2015 August 21, 2020 Bonsa
Oromiyaan biyyyoota Kaabaa Baha Afrikaa keessatti argaman keesaa takka. Yeroo ammaa, Oromiyaan biyya bilisummaa fi walabummaa qabdu osoo hin tahin, biyya koloneeffatamtee impaayera Itoopphiyaa jalatti gabrummaa dhaan jirattu taatee argamti. Oromiyaan karaa kaabatiin Biyya Habashaa fi Biyya Affariin daangeeyfamti. Karaa Bahaatiin Soomalee-Issaafii Ogaadeniin daangeeyfamti. Karaa Lixaatiin naannoo uummatoota kibbaa, Gambeellaa, Banii Shangulii fi Sudaaniin daangeyfamti. Karaa Kibbaatiin Keeniyaa dhaan daangeeyfamti.
Oromiyaa bal’inaan kaare-kilomeetira 600000 yoo taatu, uummata lakkooysaan miliyoona 40 tahu qabdi. Bal’ina lafaatiin Oromiyaan biyyoota bebbeekkamoo akka Jarmanii, xaaliyaanii, Ispaaniyaa, Ingilizii fi Biyya Jaappaani faa ni caalti.
Karaa heddummina lakkooysa uummata isiirra jiraataniitiin immoo Ispaaniyaa, Polaandaa, Morokoo, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Sa’udii Arabiyaa faa ni caalti
Next Seena Ummata Oromoo